Sheet Polyethylene Borated, Sheet Uhmwpe, Road Mat sementara - Honbochem
Miorina amin'ny faritra vita amin'ny polyethylene vita amin'ny CNC ...
tsihy amin'ny lalana vonjimaika
Tongasoa eto Hongbao Chem
Professional Borated Polyethylene HDPE Products fanamboarana.
Ningjin County Hongbao Chem Co., Ltd mifantoka amin'ny Borated Polyethylene Products, vokatra miaro neutron, UHMW-PE Sheets, tabilao HDPE, tsihy amina lalana vonjimaika.
Ny Hongbao Chem dia any avaratr'i China, lalana 2ora mankany Beijing sy Shanghai. Hongbao dia manana hery ara-teknika matanjaka ary manana ivon-pikarohana, fampandrosoana, famokarana ary varotra siantifika manokana. Izahay dia matihanina amin'ny injeniera vokatra plastika. Hongbao Chem no manana ny tsipika famokarana lehibe indrindra ary mihoatra ny 10 ny fitaovana fanodinana CNC.
2021 fivarotana mafana HDPE proteina vetivety ...
Tsihy fiarovana ny tany HDPE novokarin'i Hongbao Chem Co., Ltd. Ny làlana vonjimaika amin'ny fanamboarana dia manana lanjany matanjaka, mateza, lava, anti-slip ary mavesatra entana. Ary mpiaro ny tany HDpe mat matanjaka tsy mahazaka simika mora apetraka lalotra vonjimaika izay ampiasaina amin'ny transportati ...
Ny fampiasana lehibe an'ny Neutron III madinidinika
Ao amin'ny sary neutron, ny neutron dia tsy maintsy ampidinina amin'ny hafainganam-pandeha takiana amin'ny sary aorian'ny namokarana azy. Ny hafainganam-pandehan'ny neutron dia misy fiantraikany amin'ny halalin'ny fidirana sy ny sary farany, mamela ny fandaminana tsara ny fizotrany. fanaraha-maso ny welding, casting ...